(7-S Framework) လုပ်ငန်းအောင်မြင်တိုးတက်မှု မဟာဗျူဟာ -
ကမ္ဘာတ၀ှမ်းရှိ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းများကို သုသေသနပြုလုပ်လျှက်ရှိသော McKinsey အဖွဲ့အစည်းမှ လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် 7s Framework ကို ဖန်တီးထားပြီး၊ Management လောကတွင် အလွန်အသုံးဝင်ပြီး နာမည်ကြီးသော Tool တခုပင်ဖြစ်ပါတယ်။
တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုနဲ့အတူ ယနေ့ခေတ်အောင်မြင်နေသော လုပ်ငန်းတခု၏ နောက်ကွယ် အားသာမှု တွင် S-7 လုံး၏ စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့်ဆိုရလိမ့်မယ်။
1. Strategy (မဟာဗျူဟာရေးဆွဲခြင်း)
လုပ်ငန်း၏ ကာလတို မျှော်မှန်းချက်၊ ကာလရှည် ရည်ရွယ်ချက်များသို့ အောင်မြင်ရောက်ရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ရမည့် မဟာဗျူဟာ၊ အစီအစဉ်၊ လမ်းညွှန်ချက်များကို ကြိုတင်ရေးဆွဲထားပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
2. Structure (ဖွဲ့စည်းတည်ဆောင်ခြင်း)
အဖွဲ့အစည်း၏ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များသို့ ပြီးမြောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်သော (လူ – ငွေ – အရာဝတ္တု) အရင်းအမြစ်များအပေါ် သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းပုံစံဖော်ဆောင်ပြီး လုပ်ငန်းများကို တိုးတက်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
3. Systems (နည်းစနစ်များချမှတ်ခြင်း)
လုပ်ငန်းစနစ်တကျလည်ပတ်မှုသို့ အခြေခံမူဝါဒများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းက်းများ၊ SOP လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များဖြင့် အဖွဲ့အစည်းလည်ပတ်ဖော်ဆောင်မှုများကို စနစ်တကျလမ်ညွှန်ရေးဆွဲထားဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
4. Staff (၀န်ထမ်းအရင်းအမြစ်ဖြည့်ဆည်းခြင်း)
လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်များသို့ အောင်မြင်ပြီးမြောက်စေရန်အတွက် ၀န်ထမ်းအင်အားဖြည့်ဆည်းခြင်း နှင့် ၀န်ထမ်းအားလုံးမှ လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုသို့ ရှေ့ရှုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်များတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
5. Style (လုပ်ငန်းပုံစံများ သတ်မှတ်ခြင်း)
လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်မှုများ ပြီးမြောက်စေဖို့ ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အချင်း နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ပုံစံများဟာ မှန်ကန်တိကျမှုရှိပြီး အဖွဲ့အစည်းနဲ့ လိုက်လျှောညီထွေစွာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲစီမံခန့်ခွဲ ဦးဆောင်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
6. Skills (အရည်အချင်း – စွမ်းရည်များ တိုးမြင့်ခြင်း)
တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်နဲ့အညီ အဖွဲ့အစည်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ အရည်အချင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုများ မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးတက်ပြီးမြောက်များဖြင့် ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်များကိုဖော်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
7. Shared Values (တန်ဖိုးတရားများ မျှဝေခြင်း)
– လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ပတ်သတ်နေသူ အားလုံးမှ အတွေးအခေါ်အယူအဆများ၊ အတွေ့အကြုံလုပ်ဆောင်မှုများ နှင့် တန်ဖိုးရှိမှုများအား မျှဝေပေါင်းစပ်ပြီး လုပ်ငန်းတန်ဖိုးများ ပိုမိုတိုးတက်မှုရှိစေရန် ၀ိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Strategy (မဟာဗျူဟာ)၊ Structure (ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ)၊ System (နည်းစနစ်) စတဲ့
အချက်များ သည် Hard Skills အပိုင်းဖြစ်ပြီး၊
Staff (၀န်ထမ်းအရင်းအမြစ်)၊ Skill (အရည်အချင်း-စွမ်းရည်)၊ Style (လုပ်ငန်းပုံစံ) နှင့် Share Value (တန်ဖိုးတရားမျှဝေမှု) တို့သည် Soft Skills အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Soft Skills နှင့် Hard Skills အပိုင်းများ ခွဲခြားထားသော်လည်း တခုနှင့်တခုဟာ ချိတ်ဆက်ပြီး အကျိုးပြုနေပါတယ်။ S တစ်လုံးအားသာလာခြင်းသည် အခြားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုလည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ လုပ်ငန်းအတွင်းပိုင်း အားသာချက်ဖြစ်ခြင်းဟာ – လုပ်ငန်းအပြင်ပိုင်း အခွင့်အရေးများစွာကို ဖန်တီးနိုင်မှာမို့ 7-S Framework ဖြင့် လုပ်ငန်းတိုးတက် စီမံဦးဆောင်နိုင်ဖို့ အကြံပေးရေးသားလိုက်ပါရစေ။
သင် သိပြီးပြီလား… ??? သင်ရဲ့ #အခွင့်အရေးဆိုတာ…